10 Iindawo ezigqibeleleyo zezilwanyana zasendle kwihlabathi | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Iindawo ezigqibeleleyo zezilwanyana zasendle kwihlabathi
99% abafuna izilwanyana zasendle bakhetha ukuya e-Afrika kuhambo lwe-epic safari. kunjalo, sikhethe iifayile ze 10 kweyona ndawo ifanelekileyo yezilwanyana zasendle emhlabeni, ukusuka eYurophu ukuya eTshayina, ezingahambanga kangako, kodwa iindawo ezingalibalekiyo nezizodwa.
1. Jiuzhaigou E-China
Ikhaya ukuya 40% zohlobo lwezilwanyana zasendle, nezilwanyana e China, iNtlambo iJiuzhaigou yiyo 4800 Iimitha ukuphakama. Intlambo yaseJiuzhaigou yenye 10 kweyona ndawo ifanelekileyo yezilwanyana zasendle emhlabeni ene landscape omangalisayo kunye ne-ecosystem etyebileyo.
KwiNtlambo yaseJiuzhaigou, uya kuba nethuba elingenakuthelekiswa nanto lokubona Ipaki enkulu, ipanda ebomvu, Sichuan takin, kunye nenkawu eneempumlo ezi snub. Ezi zezimbalwa zezinye izilwanyana ezinqabileyo ezihlala kwintlambo yaseJiuzhaigou kangangeenkulungwane. Ezi ntlobo zisengozini zihlala kwindawo eneengxangxasi, amachibi, iintaba zelitye lekalika, kunye nokwenziwa kweKris, indawo yobuhle obubalaseleyo eya kuthi inyuse imimoya yakho kunye neeholide zezilwanyana zasendle ziye kwinqanaba elitsha.
Uphi I-Jiuzhaigou Valley E-China?
Intlambo entle yaseJiuzhaigou iphondo laseSichuan e-China kwaye iyafikeleleka isuka eBeijing okanye eChengdu.
2. Iindawo ezigqibeleleyo zezilwanyana zasendle kwihlabathi: Shennongjia E China
Ukuze ubone iSichuan Snub-nosed Monkey akufuneki uhambe kude kuba le inkawu inqabileyo ihlala emahlathini kumbindi we China. ilungile lo nto, iShennongjia Indawo yokuGcina izilwanyana Kwiphondo laseHubei likhaya lenkawu elikhohlakeleyo, ibhere elimhlophe, kusibekele, izingwe eziqhelekileyo, kunye nebhere elimnyama laseAsia.
Ukwengeza, iShennongjia Nature Reserve intle ngokugqwesileyo ineencopho eziphakamileyo kunye nemilambo ephantsi. Ukususela ebusika ukuya ehlotyeni, izimvo zotshintsho lwendalo yasendle unyaka wonke, ethembisa ngamava ahlukileyo nanini na xa ugqiba kwelokuba undwendwele. kunjalo, elona xesha lilungileyo lokundwendwela ngoMeyi ukuya kuSeptemba, kwaye kufuneka ubhukishe amatikiti akho.
Iphi iShennongjia Nature Reserve eChina?
Indawo yokugcina i-Shennongjia ikumbindi we China, kwaye kungcono ukwenza isiseko sakho sezilwanyana zasendle kwidolophu yaseMuyu.
3. Iindawo ezigqibeleleyo zezilwanyana zasendle kwihlabathi: INtaba iHuangshan E-China
Inkuthazo yeembongi kunye nababhali, Akumangalisi ukuba iNtaba iHuangshan yindawo emangalisayo yezilwanyana zasendle emhlabeni. I-Huangshan ifumaneka kwindawo yetropiki kwiphondo laseAnhui. ngoko ke, ukongeza kumkhozi onamachokoza, kunye nekati yasendle yaseAsia, izityalo neentyatyambo apha zezona zithandekayo kwaye zikhetheke kakhulu kuyo yonke iChina.
Izilwanyana zasendle ezinqabileyo’ Indawo yokuhlala yimithi yamandulo yepayini kunye nokwakheka kwamatye egranitic, apho unokubhabha ngaphezulu kwamafu. Konke okufuneka ukwenze kukukhetha enye 70 iincopho kwindawo entle umbono obukekayo yolondolozo lwendalo. Okukwintsusa, kuninzi ukubona, kuya kufuneka ubhukishe 2-3 iintsuku ezingenakulibaleka iholide yezilwanyana zasendle eHuangshan.
Iphi iNtaba yeNdalo iHuangshan eChina?
INtaba iHuangshan yiyo 3 kude neShanghai nge -High speed ngololiwe, kwiphondo laseAnhui.
4. Iindawo ezigqibeleleyo zezilwanyana zasendle kwihlabathi: ILiguria yeeDolphins e-Itali
Liguria kunye Cinque Terre Zidume ngokuba yimimandla enqabileyo enemibala nebukekayo kunye needolophu. Kwimeko apho ubungazi, ILiguria ikwayindawo entle yokubukela umnenga kunye nehlengesi. Ukususela ngoMeyi ukuya kuSeptemba, ungaya kolunye lwezikhephe ezininzi eLiguria kwimfuno emva kokuthakazelisa Ubomi baselwandle e-Itali.
Amanxweme amahle kunye namawa eCinque Terre azele zii-coves ezifihlakeleyo, nemimangaliso engaphantsi kolwandle. ke, ukusuka kwisikhephe okanye ukungena emanzini, kunye ne-snorkeling, uyakumangaliswa zizilwanyana zaselwandle eLiguria. Iholide yezilwanyana zasendle eLiguria ngokungathandabuzekiyo yenye yeendlela ezilungileyo zokuchitha ihlobo.
5. Iholide Yezilwanyana Zasendle KwiiPyrenees
Iintaka ezixhamlayo njengokhozi olugolide lubhabha ngaphezu kwentloko yakho, kunye ne-chamois kunye ne-ibex ezindleleni, IPyrenees yenye yezona ndawo zintle zasendle emhlabeni. Iincopho zentaba ezimangalisayo, iminqwazi enekhephu, kunye nokuzala kwendalo, Ipaki yasePyrenees yaseFrance yenye yeendawo eziphambili zeholide yezilwanyana zasendle eYurophu.
ke, ukongeza kwintaba kwiiPyrenees ezintle, ungaya kuhambo lokulandela umkhondo webhere, okanye utyelelo lokufota kweentaka. Nangona iiPyrenees zaseFrance ziyindawo edumileyo yokuchitha iholide eYurophu, indawo ibanzi kangangokuba ungakhathazeki malunga nabanye abahambi aboyikisayo izilwanyana zasendle ezintle.
Yeyiphi indlela ebalaseleyo yokuya kwiiPyrenees zaseFrance?
Ukuthatha i-Eurostar eLondon, kwaye uloliwe we-TGV osuka eParis okanye eLille usiya eTououse yeyona ndlela ihamba phambili yokuya ePyrenees.
6. Iindawo ezigqibeleleyo zezilwanyana zasendle kwihlabathi: ICamargue in France
Indawo yesizwe yaseCamargue eFrance yenziwa ngo 1972 kwaye kuyinto ipaki yelizwe ekhuselweyo. kunjalo, amachibi kunye nomgxobhozo yeyona ndawo ikhuselweyo eYurophu, kwaye nantsi ikhaya 400 iintlobo zeentaka kunye nepinki enkulu epinki.
Apha uya kuba nethuba lokuhamba ngomlambo omkhulu eYurophu, Delta, kwaye khangela amahashe asendle. Ngaphezu, sEnye yeentaka ezikhethekileyo onokuzibona apha ziiHerple Herons, IiTerns ezincinci, kunye neGull eneentloko ezimnyama.
Elona xesha lokuhamba lixesha lasehlotyeni xa iintaka zifika kunye namahashe angwevu.
Yeyiphi indlela ebalaseleyo yokuya eCamargue?
Ungathatha uloliwe ukusuka eParis ukuya eNimes, Marseille, okanye Arles, emva koko ibhasi.
7. IFisser Hofe eOstriya
517 Iikhilomitha zezilwanyana zasendle, I-Fisser Hofe entshona yeTyrol yenye yezona mfihlo zigcinwe kakuhle zase-Austria. Ababaninzi abayaziyo le ndawo, kodwa apha uyakufumana amabala amahle okufota kwezilwanyana zasendle.
Ngentwasahlobo iFisser Hofe iqhume ngokupheleleyo, kwaye unokuba nethamsanqa ngokwaneleyo lokufaka ibhabhathane elimnandi lika-Apollo. mhlawumbe, Uza kubona ukhozi olumnyama etyholweni, okanye enye i-chamois yasendle, Ibhokhwe, kunye nehagu yasendle. kunjalo, eyona ndlela yokuzibona izilwanyana ezinqabileyo ukunyuka intaba, ukuba 3000 mitha, kwenye yeendlela ezininzi eFisser Hofe.
Yeyiphi indlela ebalaseleyo yokuya kwiFisser Hofe e-Austria?
Unokuhamba ngoololiwe be-OBB ukusuka imizi emikhulu eOstriya ukuya kwidolophu yaseFiss eTyrol. Salzburg, Vienna, okanye i-Innsbruck ukuya kwiFiss ngololiwe we-OBB ziindlela ezidumileyo zokuhamba ngololiwe.
8. Iindawo ezigqibeleleyo zezilwanyana zasendle kwihlabathi: Izilwanyana zasendle kuMlambo iDanube
Isuka e Ihlathi elimnyama eJamani, ukutyhutyha iYurophu ukuya eRomania, Umlambo iDanube yenye yezona ndawo zibalaseleyo zezilwanyana zasendle emhlabeni. ngoko ke, njengomthombo omkhulu wamanzi kunye nokutya, Akumangalisi ukuba uMlambo iDanube yenye yezona ndawo zibalaseleyo ukujonga iintlobo zezilwanyana ezisengozini.
Umzekelo, i <em> kingfisher encinci yaseYurophu yenye yezona zibalaseleyo 400 iintlobo zeentaka ezihlala kuMlambo iDanube. Ukwengeza, in Iinduli zeZemplen, kunye nepaki yesizwe iAggtelek, ungabukela 73 iintlobo zezilwanyana ezanyisayo, njenge mpungutye ebomvu nomvundla omdaka.
9. IMerfelder Bruch Reserve Reserve eJamani
Ikhaya ukuya kumhlambi wokugqibela wamahashe asendle eYurophu kwaye enye yezona ndawo zintle kwezakha zabonwa kukubaleka kwamahashe asendle. ngoko ke, Ipaki yeHohe Mark yindawo oyithandayo yokubukela izilwanyana zasendle.
Ukwengeza, phakathi kwamahlathi kunye nemihlaba eluhlaza, unokuba nethamsanqa ukubona iDulmen Pony entle. I-Dulmen Pony luhlobo lwamahashe, ndihlala eMerfelder Bruch, edolophini yamahashe asendle, okanye iRhine-Westphalia. IMerfelder Bruch yindawo engcwele kuzo zombini iintlobo zamahashe ezihlala ngokukhululekileyo kwindawo yazo yendalo.
Yeyiphi indlela eyiyo yokuya eMerfelder Bruch?
Ukuthatha uloliwe ukusuka eBritane okanye naphina eJamani ukuya eKolon naseMantla eRhine-Westphalia. Emva koko unokujoyina ukhenketho okanye uqeshise imoto eMerfelder Bruch.
10. Iindawo ezigqibeleleyo zezilwanyana zasendle kwihlabathi: Iintyatyambo zeWengen zeAlps zaseSwitzerland
Zonke iindawo ezintle kwi 10 Eyona ndawo ifanelekileyo yezilwanyana zasendle emhlabeni likhaya lezilwanyana zasendle ezinqabileyo eYurophu. kunjalo, I-Wengen likhaya lezilwanyana zasendle ezimangalisayo kwaye lizulu lezityalo. Ifunyanwa kwiiAlps zaseSwitzerland, Iimbono apha ziyamangalisa, Ngeentaba ezinekhephu, Iintlambo eziluhlaza eziluhlaza, iingxangxasi, kunye neentyatyambo ezikhwankqisayo.
NgoJulayi amabhabhathane asendle ahombise i-Lady Slipper Orchid enqabileyo, ixilongo gentians, zintsi, kunye nezinye iintyatyambo ezinomtsalane ecaleni komkhenkce we-Eiger. Ezi ntyatyambo zikhwankqisayo zikhula kwiindawo eziphakamileyo zeSwiss Alps, inyuke intili entle yaseLauterbrunnen. ke, zilungiselele ukunyuka uye emafini kunye nesibhakabhaka esicacileyo ukuze ubone le mimangaliso yendalo.
Yeyiphi indlela ebalaseleyo yokufumana i-Wengen Bernese Oberland?
Thatha uloliwe uye kwintlambo yaseLauterbrunnen, emva koko kuloliwe oya kwilali yaseWengen.
Apha Gcina A Isitimela, Siya kukuvuyela ukukunceda ucwangcise uhambo olungalibalekiyo, okanye zonke 10 kweyona ndawo ifanelekileyo yezilwanyana zasendle emhlabeni: iYurophu okanye iTshayina ngololiwe.
Ngaba uyafuna ukufaka iposti yethu yebhlog "Iindawo ezi-10 eziBalaseleyo zeZilwanyana zasendle kwihlabathi" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-wildlife-destinations-world%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
eyolonwabo isilwanyana Iindawo ezikufutshane Ukhenketho oluLungileyoChina oksinenkosi Iindawo ezihlala ubomi benyani kwihlabathi liphela Iindawo eziFani izilwanyana zasendle